Tatitra ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny tambazotra OSCAPE ! | Grandir à Antsirabe
Tatitra ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny tambazotra OSCAPE !
Faran’ny septambra teo no nanatanterahana ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny vondrona OSCAPE eto Antsirabe. Nandritry ny telo andro no nadraisana ireo ankizi’ny fikambanana mpikambana ao amin’ny vondrona ary anisan’izany ny ankizin’ny fikambanana Grandir à Antsirabe.
Fihaonana mampialavoly eo amin’ny samy fikambanana
Nitovy tamin’ny herintaona ihany, ity hetsika ity dia tafiditra ao anatin’ny « commission sport et loisir » ao amin’ny tambazotra. Ny tanjona nadritra ny telo andro ? mampiroborobo ny fihaonana amin’ny fikambanana ary manamafy ny fifandraisana efa misy eo amin’ny samy mpikambana, eo amin’ny samy ankiz ary eo amin’ny samy mpanabe ka tao no nisy tena navitrika tamin’ny filatsahana antsitra-po.
Samy nahazo ny anjara tandrify azy
Teo amin’ny kianja lehibe izay nampidramin’ny orinasa Star no nihaonan’ireo fikambanana 12 izay nahitana hetsika karazany 32 : fanatanjahantena, Lalao, fampisehoana sy dihy. Tsy hitahita akory dia tapitra ny telo andro !
Nanomboka tamin’ny fandaminana ny toerana ny maraina, narahan’ny filatroana nataon’ireo fikambanana sy ny kabarin’ireo manam-pahefana. Tsindrina manokana ny fanentanana tamin’ny alalan’ny tanisa sy dihy nataon’ny ankizin’ny fikambanana zaza mendrika.
Teo amin’ny lalao indray dia maro ireo safidy ka tsy hay izay safidiana : « échec », kanety na koa katro. Teo amin’ny fanatanjahan-tena ihany koa dia nalalaka ny safidy : baskety, kitra sy fifaninanana hazakazaka. Niforona ho azy ny ekipa mifangaro eo amin’ny samy mpikambana ary nanomboka nifandray izy ireo.
Ankizin’ny CHT tena nafana fo
Nosahanin’ireo mpanabe mpanao fanatanjahan-tena, Toky sy Arsène, miaraka amin’ireo mpilatsaka antsitra-po 6 ireo ankizy CHT miisa 20, izay afaka nisitraka iny fotoana feno ezaka sy fifanakalozana iny. Ny sasany tamin’izay ireo aza moa dia tena niavaka tokoa : ohatra tamin’izany ny nahazoan’ny mpilalaon’ny fikambanana voalohany tamin’ny toraka kapoaka !
Sakafo ô !
Ny atoandro dia isy ny fiaraha-misakafo ! Ny fikambanana tsirairay no nitondra ny sakafo (mitovy ho an’ny rehetra mba hisian’ny fitoviana) sady nanararaotra ny fotoana mba hifanankalozana amin’ny hafa.
Ny tapak’andro hariva farany dia voamariky ny fizarana diplaoma ho an’ny tsirairay, ny fizarana yaourt avy amin’ny orinasa Socolait ary fanomezana ho an’ny ankizy tsirairay.
Fisaorana lehibe ho an’ny tambazotra OSCAPE dia amin’ny herin-taona indray ho an’ny andiany fahatelo !
Lire aussi : Portrait Arsène
MG	Portrait Elysé
MG	Portrait Arsène